Stock Account Archives - Glory Assumption Space
Stock Accountant – Female (5) Posts
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော လှိုင်သာယာမြို့နယ်ရှိ လူသုံးကုန်နှင့်စားသောက်ကုန် Distribution Company ကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ အမြန် အင်တာဗျူးဝင်ရမည်။ 1.	Stock Accountant – Female (5) Posts / လစာ - ၂၅၀,၀၀၀ ကျပ် (ညှိနှိုင်း) / လှိုင်သာယာမြို့နယ် ။ •	မည်သည့်ဘွဲ့ရမဆို (သို့) LCCI Level (3) အောင်မြင်ပြီးသူ ဖြစ်ရမည်။ •	အသက် (၂၅) နှစ်နှင့် အထက်ဖြစ်ရမည်။ •	Inventory Control ပိုင်းတွင် အတွေ့အကြုံ (၂) နှစ်ခန့် ရှိရမည်။ •	Proficient in Microsoft office word, excel, powerpoint , internet and email. •	Microsoft Office Application များဖြစ်သော Word ၊ Excel ၊ Powerpoint တို့အား ကောင်းစွာအသုံးပြုနိုင်ရမည့်အပြင် Internet – Email အစရှိသည်တို့အားလည်း ကောင်းစွာ အသုံးပြုနိုင်ရမည်။ •	SAP System အသုံးပြုနိုင်သူဆိုပါက ပိုမို အဆင်ပြေပါသည်။ •	အလုပ်ချိန် (8:30 AM – 5:00 PM ) •	ယူနီဖောင်းရှိသည်။ ဖယ်ရီရှိသည်။ •	တနင်္ဂနွေနှင့် အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များပိတ်သည်။ •	လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံပေါ်မူတည်၍ လစာညှိနှိုင်းနိုင်သည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com Phone No.- 09-263121101 , 09 262223785, 09 262223784 Viber Phone Number – 09263121101, 09262223784 , 09262223785 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့် နီးပါသည်။ )
Stock Accountant – Female - (5) Posts / လစာ - ၃၀၀,၀၀၀ ကျပ် (ညှိနှိုင်း)
###### URGENT REQUIREMENT ###### GAS Recruitment နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Promotion Item Distribution Company တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်းများ အမြန်အလိုရှိသည် ။ ချက်ချင်းအင်တာဗျူး ၀င်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ ၁) Stock Accountant – Female - (5) Posts / လစာ - ၃၀၀,၀၀၀ ကျပ် (ညှိနှိုင်း) / တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ။ • ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည် ။ • LCCI Level (3) အောင်မြင်ပြီးသူ ဖြစ်ရမည်။ • အသက် ( ၂၅ ) နှစ်နှင့် အထက်ဖြစ်ရမည်။ • Inventory Control ပိုင်းတွင် အတွေ့အကြုံ ( ၂ ) နှစ်ခန့် ရှိရမည်။ • Computer Word,Excel,Internet & Email အသုံးပြုနိုင်ရမည်။ • စနေ၊တနင်္ဂနွေပိတ်သည်။ • အလုပ်ချိန်မနက် ၉ နာရီမှ ညနေ ၅ နာရီခွဲအထိတာဝန် ထမ်းဆောင်ရပါမည်။ • တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ Promotion Item Distribution Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ လျောက်ထားလိုသည့်ရာထူးများကို တစ်ပါတည်းဖေါ်ပြပေးကြပါရန် နှင့် CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Stock Accountant – Female (5) Posts / လစာ - ၂၅၀,၀၀၀ ကျပ် (ညှိနှိုင်း)
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော လှိုင်သာယာမြို့နယ်ရှိ လူသုံးကုန်နှင့်စားသောက်ကုန် Distribution Company ကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ တစ်ပတ်အတွင်း အင်တာဗျူးဝင်ရမည်။ 1.	Stock Accountant – Female (5) Posts / လစာ - ၂၅၀,၀၀၀ ကျပ် (ညှိနှိုင်း) / လှိုင်သာယာမြို့နယ် ။ •	မည်သည့်ဘွဲ့ရမဆို (သို့) LCCI Level (3) အောင်မြင်ပြီးသူ ဖြစ်ရမည်။ •	အသက် (၂၅) နှစ်နှင့် အထက်ဖြစ်ရမည်။ •	Inventory Control ပိုင်းတွင် အတွေ့အကြုံ (၂) နှစ်ခန့် ရှိရမည်။ •	Proficient in Microsoft office word, excel, powerpoint , internet and email. •	Microsoft Office Application များဖြစ်သော Word ၊ Excel ၊ Powerpoint တို့အား ကောင်းစွာအသုံးပြုနိုင်ရမည့်အပြင် Internet – Email အစရှိသည်တို့အားလည်း ကောင်းစွာ အသုံးပြုနိုင်ရမည်။ •	SAP System အသုံးပြုနိုင်သူဆိုပါက ပိုမို အဆင်ပြေပါသည်။ •	အလုပ်ချိန် (8:30 AM – 5:00 PM ) •	ယူနီဖောင်းရှိသည်။ ဖယ်ရီရှိသည်။ •	တနင်္ဂနွေနှင့် အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များပိတ်သည်။ •	လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံပေါ်မူတည်၍ လစာညှိနှိုင်းနိုင်သည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com Phone No.- 09-263121101 , 09 262223785, 09 262223784 Viber Phone Number – 09263121101, 09262223784 , 09262223785 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့် နီးပါသည်။ )
Stock Account – Female (5) Posts / လစာ - ၂၅၀,၀၀၀ ~ ၃၀၀,၀၀၀ ကျပ်(ညှိနှိုင်း)/ အလုံမြို့နယ်။
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS Company နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Trading Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။(တစ်ပတ်အတွင်းအင်တာဗျူးဝင်ရမည်) 1.Stock Account – Female (5) Posts / လစာ - ၂၅၀,၀၀၀ ~ ၃၀၀,၀၀၀ ကျပ်(ညှိနှိုင်း)/ အလုံမြို့နယ်။ - တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှဘွဲ့ ရရှိပြီးသူဖြစ်ရမည်။ - အသက် (၃၀)နှစ် အောက်ဖြစ်ရမည်။ - LCCI Level (III) ပြီးသူဖြစ်ရမည်။ - Computer ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုနိုင်ရမည်။ - Stock Account လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၂)နှစ်ရှိသူဖြစ်ရမည်။ - အလုပ်ချိန် (8:30 AM to 5:30 PM) - တနင်္ဂနွေနှင့် အစိုးရရုံးပိတ်ရက်ပိတ်သည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr3@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number –09- 262223785 , 09 977397705, 09 263121101, 09262223784. Viber Phone Number –09262223784, 09 977397705, 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့် နီးပါသည်။)